Uphahla Roll Ndiyila Machine, fracturing Decoiler, Steel Purlin Machine - Haixing
roll kophahla incence Umatshini bokwakha
roll kophahla Trapezoidal Umatshini bokwakha
IBR roll kophahla bokwakha machine
roll kophahla okuphekwe Umatshini bokwakha
Double Umaleko roll Umatshini bokwakha
Uphahla ephakeme roll bokwakha machine
Uphahla enomva roll bokwakha machine
Ukuma komphetho roll kophahla bokwakha machine
ilitye Umbala umgca wemveliso kophahla
Okunye OEM uphahla roll Umatshini bokwakha
Ukugudisa line uqhoqhoqho imveliso
Ukulinganisa umatshini ukusika
Sika ngomshini ubude
C purlin roll bokwakha machine
Z purlin roll Umatshini bokwakha
U purlin roll bokwakha machine
CZ machine purlin interchangeable
Light isiqu steel roll Umatshini bokwakha
T igridi roll bokwakha machine
C ukukhanya steel zikhangeleke roll bokwakha machine
U ukukhanya isiqu steel roll Umatshini bokwakha
Downspout roll bokwakha machine
Imvula emdaka roll bokwakha machine
Sandwich panel roll bokwakha machine
Panel Rock Iwulu Sandwich Roll Ndiyila Machine
Panel DB Sandwich Roll Ndiyila Machine
Panel EPS Sandwich Roll Ndiyila Machine
Floor sinendawo roll bokwakha machine
Okunye oomatshini ehlobene
Izimvu Ukugoba Roll Ndiyila Machine
Shutter Door Roll Ndiyila Machine
Door Roll Isakhelo Ndiyila Machine
Highway kuhola Roll Ndiyila Machine
umatshini wokwenza Nail
Yenyuka Roof Sheet
Ogciniweyo Roof Sheet
Umbala Stone Roof Sheet
Ridge cap uphahla
Ezinye iintlobo Roof
Khangela incwadi iimveliso zethu ezintsha ngezantsi
Uphahla Double Tile Machine
Trapezoidal Roof Roll Ndiyila Machine
NgeNgca Ridge Cap Roll Ndiyila Machine
iimveliso zethu ziquka oomatshini roll kophahla bokwakha, oomatshini sokulinganisa kunye kuchetywa, decoilers, oomatshini c & z purlin esongwayo bokwakha, imigca uqhoqhoqho, oomatshini NdinguMenzi wokukhanya zikhangeleke steel uluhlu kunye nezinye izixhobo ezinxulumene.
Yonke imveliso athobele kunye nemigangatho kwemigangatho amazwe ngamazwe kwaye kuthakazelelwa kakhulu iintlobo kweemarike ezahlukeneyo kulo lonke ihlabathi, ezifana Asia, eAfrika, eYurophu, Umzantsi Melika, kwaye Australia njalo njalo.
Thina abenzi kakhulu
inkampani yethu owned iqela yoyilo wobungcali, siye lungayilwa iprofayile eyahlukeneyo iimfuno zabathengi yakhe.
Injongo yethu kukuba ukukhonza abaxumi bethu ngentliziyo. Sibonelela inkonzo kude ukuvumela abathengi ukuba bathenge le mveliso ngaphandle amaxhala.
koomatshini yethu ukuvelisa iindidi ezahlukeneyo izinto zokwakha ezifana tile umbala intsimbi, intsimbi ukukhanya zikhangeleke purlin somgangatho kweqonga njalo njalo.
Musa ukuba yeyiphi umatshini kunye izinto ukukhetha?
Yiza, siza kukunika iingcebiso kakhulu ngobuchule kunye nenkonzo best!
Yiya page contact
NYANISEKA iyinjongo yethu WIN-WIN yi sifeze yethu